Duulimaadyada ka yimaada Hawaii ilaa Samoa American ee Hawada Hawaiian hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Duulimaadyada ka yimaada Hawaii ilaa Samoa American ee Hawada Hawaiian hadda
Airlines • Airport • Wararka Samoa American • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Jabinta Hawaii • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Shirkadda Hawaiian Airlines waxay dib u bilaabaysaa adeeg aan joogsi lahayn oo u dhexeeya Honolulu Daniel K. Inouye iyo madaarada caalamiga ah ee Samoa ee Pago Pago oo wata diyaaraddeeda Airbus A330.
Hawaiian Airlines ayaa dib u bilawday duulimaadyadii ay ku tagi jirtay Samoa American.
Hawaiian Airlines waxay bixin doontaa laba duulimaad bishiiba.
Marinka Hawaii ilaa Ameerika ee Samoa waxaa u adeegi doona diyaaradda Hawaiian Airbus A330.
Hawaiian Airlines ayaa dib isku xireysa Honolulu (HNL) iyo American Samoa (PPG) iyadoo dib loo bilaabay duulimaadyadii aan joogsiga lahayn ee u dhaxeeyay Hawai'i iyo Territory -ka Mareykanka toddobaadka soo socda. Hawaiian, oo hakisay adeeggeeda HNL-PPG laba-toddobaadle ah bilowgii masiibada COVID-19 bishii Maarso 2020, waxay bixin doontaa laba duulimaad bishiiba laga bilaabo Isniinta ilaa Diseembar 20.
Brent Overbeek, madaxweyne ku xigeenka sare ee qorshaynta shabakadda iyo maamulka dakhliga ee Hawaiian Airlines. "Annaga oo ah deriska jasiiradda Baasifigga, waxaan fahamsanahay inta ay martidayadu ku tiirsan yihiin adeegeena waxaana rajeyneynaa inaan si ammaan ah dib isugu xirno qoyska iyo saaxiibbada."
Hawaiian, oo bixisa isku -xidhka hawada ee sida joogtada ah loo qorsheeyey ee u dhexeeya labada silsiladood ee jasiiradda, ayaa hakad geliyay duulimaadyadii 17 bilood codsi ka yimid dawladda Samoa ee Mareykanka. Janaayo 13 -keedii, Hawaiian waxay bilowday ka -shaqaynta duullimaadyo dib -u -celin ah oo taxane ah si ay ugu keento Ameerikaan Samoa kumanaan qof oo deggan oo ku go'doonsanaa guriga Hawaii, dhul -weynaha Mareykanka iyo wixii ka dambeeya.
Dadka u safraya Samoa Ameerika waa inay raacaan taxane ah borotokoollada caafimaadka iyo badbaadada ee dowladda, oo ay ku jirto caddeynta tallaalka iyo natiijooyinka baaritaanka safarka ka hor. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga heli karaa mareegaha TALOFApass. Martida u duulaysa Hawaii waxaa laga rabaa inay abuuraan xaalad xisaabta Safarka Nabdoon ee Hawai'i oo ay soo geliyaan kaarkooda tallaalka ama imtixaanka safarka ka horreeya ee xun si looga fogaado karantiil marka ay yimaadaan.
Hawaiian waxay sii wadi doontaa inay ku shaqeyso waddada iyada oo leh 278-kursi, oo ah diyaarad ballaadhan oo ah Airbus A330.